.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Bunny Phyo - လူပျိုလှည့်တေး Album
Bunny Phyo - လူပျိုလှည့်တေး Album
Bunny Phyo ရဲ့ သီချင်းတွေကို အရမ်းကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် လူပျိုလှည့်တေး ဆိုတဲ့ Album သစ်လေးကို
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာ လိုင်းပေါ်မှာတင် နားထောင်နိုင်သလို ဒေါင်းယူလို့လည်း ရပါတယ်။ ဒေါင်းမယ်ဆိုရင်
သီချင်းလင့်ကို Right Click >> Save Link As.. ကို နှိပ်ပါ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
1 လူပျိုလှည့်တေး Bunny Phyo Click Here !! 1.60 MB
2 လမ်းခွဲကဗျာ Bunny Phyo Click Here !! 2.00 MB
3 နောက်ဆုံးသက်သေ Bunny Phyo Click Here !! 1.80 MB
4 ဘယ်တော့များမှနီးမှာလဲ Bunny Phyo ၊ သီရိဆွေ Click Here !! 1.85 MB
5 မလွမ်းကြေး Bunny Phyo ၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ၊ ကိကိ Click Here !! 2.00 MB
6 အသည်းကွဲ Playboy Bunny Phyo Click Here !! 1.65 MB
7 ညှို့ Bunny Phyo Click Here !! 1.50 MB
8 ချစ်ခွင့်မရှိ Bunny Phyo Click Here !! 2.60 MB
9 ကျွန်တော်နဲ့ စုံတွဲများ Bunny Phyo Click Here !! 1.80 MB
10 နားလည်မှု ၅၂၈ Bunny Phyo Click Here !! 2.20 MB
11 I'm Going Crazy Bunny Phyo , ASH , Lil'Z , X Box Click Here !! 2.50 MB
12 မနက် ၄ နာရီ Bunny Phyo Click Here !! 2.00 MB
Photo Credit: Myanmar All Music Channel
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာတင်ထားတဲ့ သီချင်းဒေါင်းလုပ်လင့်တွေကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ (လုံးဝ) ကူးတင်ခွင့်မပြုပါ။
Posted by Thurainlin at 08:38